तन्नेरीको कफी क्रेज
किरण दहाल शुक्रवार, कात्तिक १७, २०७४ 909 पटक पढिएको
कुनापट्टिको टेबलमा बसिरहेका छन् दुई तन्नेरी । प्रेमी-प्रेमिका होलान्, टाँसिएर बसेका छन् । उनीहरूको अगाडि सिसाको गिलासमा कालो कफी प्रस्टै देखिन्छ । केटी एक घुट्को कफी सुरुप्प पार्छे । उसको अनुहार बिग्रिन्छ, सायद तीतो भयो । केटोको हातमा चुरोट छ । मसिनो धुवाँ उडिरहेछ, निरन्तर । क्याफेमा बसेर चुरोटसँगै कफी पिउँदा रमाइलो हुन्छ होला । मान्छेहरू अरू पनि छन् । सबै आआफ्नै धुनमा । बेलुका भइसकेको छ । तर, पनि कफी खानेको भीड उस्तै छ । केही दिनअघि पुतलीसडक स्थित ‘प्यासियो क्याफे'मा देखिएको दृश्य हो यो ।
बस्न सहज होस् भनेर टेबल कुर्सी लहरै राखिएका छन् । कफी पिएर बस्नेमध्ये धेरै युवा नै छन् । केही कलेज पढ्दै होलान् । कफी चुस्की लाउँदै मान्छेहरू गफ चुट्नमै मस्त छन् । बेलुका भएकाले होला मान्छेहरूको आवत्जावत राम्रै संख्यामा देखिन्छ । उनीहरू थरीथरीका कफी ‘अर्डर' गर्छन् । ‘अमेरिकानो', ‘एसप्रेसो', ‘क्यापासिनो' वा अरू यस्तै-यस्तै । यहाँ बस्नेहरूले कुन-कुन कफी खाइरहेछन्, म चिन्दिनँ । कफीको प्रकार दृश्यभन्दा स्वादबाट थाहा पाइन्छ । मेरो छेउकै टेबलमा चारजना केटा बसेका छन् । तीनजनाले ‘ब्ल्याक कफी' पिउँदैछन् । एकजना ‘मिल्क' । उनीहरू कलेजको गफ गरिरहेछन् । कात्तिक १२ गते आइतबारका दिन बिजुलीबजारस्थित ‘बबिन क्याफे'को माहोल हो यो ।
पछिल्लो समय क्याफेहरूमा यस्ता दृश्य प्रशस्तै देखिन्छन् । कफी पिउँदै घण्टौंसम्म गफ गर्नेहरूको संख्या बाक्लो हुन्छ । आफ्नो साथी वा प्रेमीप्रेमिकासँग बसेर कफीको चुस्की लिँदै गफ गर्दा सायद मजा हुँदो हो । एक्लै बसेर कफी पिउनेहरू पनि प्रशस्तै हुन्छन् । एक्लै होस् या साथीभाइसँग, कफी पिउनकै लागि क्याफेसम्म पुग्नेको जमात पछिल्लो समय उल्लेख्य छ । काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा त कफी पिउनु पनि फेसनकै रूपमा उदायो । ‘पहिले-पहिले कफी पिउँदिनथिएँ । एकदुई वर्ष भयो होला खान थालेको,' सुमन लिबूु (२६) भन्छन्, ‘साथीहरू हुँदा चाहिँ क्याफेतिर पनि आइन्छ । नत्र त घरमै कफी लगेको छु ।' इलाम घर भएका र हाल कलंकी बस्दै आएका उनलाई ब्ल्याक, मिल्क जुनसुकै भए पनि हुन्छ । गर्मीमा कहिलेकाहीँ चिया पनि पिउँछन् तर अब जाडो आएपछि कफी नै ठीक हुने उनले बताए । ‘पहिला-पहिला त तीतो लाग्थ्यो र खाँदैनथिएँ, हिजोआज बानी भइसक्यो,' उनी भन्छन् । कहिलेकाहीँ त चिनी नै नहाली पिइदिन्छन् । आफूले किन कफी खाने थालेँ भन्ने उनलाई थाहा छैन । सुरुवाती दिनमा साथीहरूसँग बसेर खान्थे । ‘ग्याङ्'मा बसेर कफी पिउँदा उनलाई रमाइलै पनि लाग्यो । घरमै कफीको प्याकेट लगेर पढ्न बस्दा कहिलेकाहीँ बनाएर खान थालँे । पहिला चिया खाने लिम्बू अब कफीतिर लागे । भन्छन्, ‘अलि फ्रेस भएको अनुभव हुँदो रहेछ । तीतोतीतो, मीठो हुन्छ ।' उनलाई कफीको बारेमा धेरै जानकारी चाहिँ छैन । क्याफेमा प्रायः साथीहरूसँग जाने हुँदा अरूले जे खायो उनी पनि त्यही खाइदिन्छन् । घरमा हुँदा त पानी तताएर आधा चम्चा कफी हाल्यो, सकियो । उनका साथीहरू चाहिँ प्रायः ‘कफी हाउस' गइरहन्छन् । महँगो पर्ने हुनाले लिम्बू भने कहिलेकाहीँ मात्र पुग्छन् ।
कोटेश्वर घर भएका सागर तिमल्सिना (२७) भने कफीका पारखी नै हुन् । दुईतीन दिन बिराएर उनी क्याफे जान्छन्, कफी पिउँछन् । यस्ता ठाउँमा उनी एकदुई घण्टा बिताउँछन् । ‘वातावरण नै रमाइलो हुन्छ,' उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ क्याफेमै बसेर कम्प्युटरमा काम गर्छु ।' उनी यस्ता कफी हाउसमा एक्लै जान मन पराउँछन् । साथीहरूसँग जाँदा अनावश्यक हल्ला हुने, डिस्ट्रब हुने बताउँछन् । ‘साथीहरूसँग बसेर कफी नै नखाने भनेको हैन,' उनले भने, ‘कफी भनेको दारु हैन नि ! साथीहरू नै चाहिने । अवसर मिल्यो भने साथीहरूसँग बस्ने हो ।'
कफी खान सुरुवात गर्दाको उनीसँग रमाइलो अनुभव छ । साथीले सुरुमा चिया खाने भनेर क्याफे पु¥याएको थियो । तर, त्यहाँ उसले कफी मगायो । उनले ‘कफी' भन्ने सुनिरहेकै थिए । यो घटना लगभग ६ वर्ष पहिलेको हो । ब्ल्याक कफी आइपुग्यो । उनले सुरुप्प पारे, झन्डै बान्ता आएन । तीतो कफी आधा नै छोडेर घरतिर हिँडे । पछिपछि बानी लाग्दै गयो । अहिले उनी प्राय अमेरिकानो खान्छन् । कफी खान उनलाई क्याफे नै ठीक लाग्छ । तिमल्सिनाजस्तै कफी पारखी छिन् पुतलीसडक घर भएकी सामन्ता महर्जन (२४) पनि । उनी प्रायः मिल्क कफी लिन्छिन् । कफी खान थालेको धेरै समय भएको छैन, लगभग एक वर्ष भयो । साथीसँग प्रायः उनी क्याफे जान्छिन् । कसैसँग कुनै खास विषयमा कुरा गर्नु छ भने ‘कफी हाउस' तिरै बसेर कुरा गर्छिन् । भन्छिन्, ‘मन लागेपछि खान गइन्छ । कुनै साथीलाई लामो समयपछि भेट्नु छ भने कफी हाउसतिरै रमाइलो हुन्छ ।'
पछिल्लो समय कफी खाने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । बेलुकातिर अथवा दिउँसै पनि साथीभाइ भेटघाट गर्नुपर्दा वा मुड फ्रेस गर्नुपर्दा समेत क्याफेतिर जान थालिएको छ । ललितपुरस्थित ‘फलानो क्याफे'मा काम गरिरहेका प्रशान्त कार्की भन्छन्, ‘कफी खान आउनेमा युवा पुस्ता नै धेरै हुन्छन् । प्रायः प्रेमीप्रेमिकाहरू आउँछन् ।' जाडो महिनामा अन्य समयको भन्दा धेरै हुने उनले बताए । बेलुकातिर पसलमा आउने धेरै हुन्छन् । गर्मी महिनामा पनि दैनिक सयभन्दा धेरै मान्छे कफी खान आउने गरेको उनले अनुमान लगाए । अब जाडोमा त यो संख्या झनै बढ्ने सुनाउँछन् उनी ।
त्यसो त, कफी हाउसमा युवायुवतीको संख्या धेरै देख्छन् लेखक तथा प्राध्यापक अभि सुवेदी । दैनिकजसो कफी हाउस पुग्ने सुवेदी भन्छन्, ‘मैले विचार गरेको कुरा के हो भने, कफी खानेहरू बूढाभन्दा तन्नेरीहरू नै धेरै छन् ।' सहरमा कफी खानेहरू बढेसँगै पसलहरू पनि बढ्न थालेका छन् । आफूहरूले सुरुतिर कफी खान सुरु गर्दा एकदमै थोरै संख्यामा कफी पाइने ठाउँ रहेको उनको अनुभव छ ।
सामन्ताको कफी खाने कुनै निस्चित ठाउँ छैन । समयअनुसार विभिन्न ठाउँमा पुग्छिन् । सामन्ताजस्तै कफी खाने कुनै निश्चित स्थान नभएको तर कफी पारखीहरू धेरै छन् यहाँ । कफी खान घरभन्दा क्याफेतिरै रमाइलो हुने उनले बताइन् । सामन्ताजस्तै सागर पनि कफी खान क्याफे हाउसमै रमाइलो हुने सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘क्याफेमा लामो समय लगाएर कफी खाँदाको रमाइलो नै बेग्लै हुन्छ ।'
यसरी सहरमा कफीखानेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा कफी हाउसहरू पनि बढ्दै छन् । काठमाडौंमा त अहिले जहीँतहीँ कफी खान पाइन्छ । कफी हाउस पुग्दा यस्तो लाग्छ- बिहानै उठेर चिया खानेभन्दा बेलुका कफीखानेहरू धेरै छन् । जे होस्, कफीको बास्नाले सहरका युवालाई झुमाइरहेकै छ ।
स्थानीय तहमा चौथाइ कर्मचारी 2096
मतदातालाई ओलीको पत्र : ‘अबको ५ वर्ष वामपन्थीलाई परीक्षण गर्नुहोस्' 4896
गृहमन्त्री खोइ ? 3199
अनेक प्रश्नमा कांग्रेस 118
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 85
कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद 210
‘भिजन सिन्ड्रोम'को बढ्दो समस्या 320
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1293
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8833
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14480